पाँचथरमा स्थानीय तहका केन्द्रमा विवाद – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
पाँचथरमा स्थानीय तहका केन्द्रमा विवाद
पाँचथर, २ जेठ, २०७६ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कतिपय ठाँउमा केन्द्रको किचलो कायम छ । कतै गाँउपालिका केन्द्र त कतै वार्ड केन्द्रमा असन्तुष्टि छन् । गाँउपालिकाको केन्द्रका कारणले पछिल्लो दिनमा तनाव पनि सृजना भएका छन् । फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा केन्द्रको विषयले तोडफोड तथा विरोधका कार्यक्रम समेत भएका छन् । उता हिलिहाङ गाँउपालिकामा मतदान मार्फत भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।
फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड गर्दै गाँउ सभाको बैठक खाता जलाइएको छ । रातीको समयमा ढोका फोडेर निर्णय खाता जलाइएको हो । कसले जलायो भन्ने टुङ्गो छैन । रातीको समयमा कसले जलायो भन्ने खुल्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल त्रिखत्रीले जानकारी दिए ।
चौथो गाँउसभाबाट गाँउसभाबाट घुर्विसे पञ्चमी बजारबाट केन्द्र सार्ने निर्णय भएको थियो । गाँउपालिमा सबैको पायक पर्ने गरी भन्दै गाउँसभाबाट सर्वसम्मतले घुर्विसे पञ्चमीबाट केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर सोहि राती माईनुट च्यात्ने काम भएको हो । बैठक हलमा रहेको माईनुट च्यातिएको त्रिखत्रीले बताए याङबुङदेखि माथि कोम्बुङ भन्दा मुनी केन्द्र राख्ने निर्णय भएको थियो । अझै केन्द्रको विवाद पेचिलो बन्न सक्ने स्थानीयको बुझाई छ । यो गाउँपालिका कांग्रेसले बहुमतले जितको थियो ।
यता हिलिहाङ गाँउपालिको मतदानबाट चयन भएको केन्द्रमा कार्यालय भवन निर्माण गरी कार्यान्वय गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । हाल केन्द्र रहेको साविकको पञ्चमी गाविस कार्यालय भएको ठाँउ र गोपेटार बजार मध्ये कहाँ केन्द्र बनाउने भनेर जनप्रतिनिधिबीच मतदान भएको थियो । मतदानमा पुरानै केन्द्र कायम गर्ने पक्षले जितेका थिए । गाउँपालिका प्रमुख गोपेटारको पक्षमा भएकाले अझै पनि मतदानबाट निर्णय लिइए पनि भौतिक पूर्वाधार लगायतको निर्माण गरी स्थानीय रुपमा केन्द्र कार्यान्वयमा ध्यान नदिएको स्थानीय असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-05-16 2019-05-16 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged केन्द्र विवाद पाँचथर
कुखुराको मासु कति सुरक्षित ? बर्डफ्लु त लाग्दैन ?
कञ्चनजंघा आरोहण गर्न गएका दुई भारतीयको मृत्यु, एक चिलीका नागरिक बेपत्ता
Tags: केन्द्र विवाद, पाँचथर